भारतबाट क्लिंकर नआउँदा १० सिमेन्ट उद्योग प्रभावित
काठमडौं १३ पुस । रक्सौलबासीको विरोधपछि क्लिंकर आयातमा अवरोध भएकाले १० सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । आयात खुलाउन वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा क्लिंकर बोकेको रेल्वे र्‍याक ल...
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने
काठमाडौँ । सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व संकलनला...
आर्थिक अभावमा लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदै
बैतडी । आर्थिक अभावमा बैतडी र दार्चुलाका अधिकांश लघुजलविद्युत् आयोजना धमाधाम बन्द हुँदै गएका छन् । लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका–१ शर्मोलीका १२० घरपरिवार अन्धकारमा बस्न बा...
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना पुरस्कार थाप्न नपाइने
काठमाडौं १२ पुस । राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी निकायबाट पुरस्कार वा सम्मान थाप्न नपाइने भएको छ । केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले विदेशी निकायबाट पुरस्...
हितग्राही खाता नहुनेले अब साधारण शेयर खरिद गर्न नपाउने
काठमाडौँ । हितग्राही खाता नहुनेले अब साधारण शेयर खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार शेयर खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा उक्त खाता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर...
२२ वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने
काठमाडौँ । आगामी २२ वर्षपछि मुलुकमा विद्युतको उच्चत्तम माग १८ हजार १३७ मेगावाट पुग्ने भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३९÷४० सम्ममा विद्युतको माग बढेर उक्त बिन्दुमा पुग्न...
काठमाडौँ । अपी पावर कंपनीले थालेको आठ मेगावाट क्षमताको अप्पर नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । दार्चुला जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको उक्त परियोजनाको भौतिक निर्माण कार्य सकिएकाले आ...
एनसेल मेलामा झुम्यो पोखरा
काठमाडौ । एनसेलले शनिबार पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र, नयाँ बजारमा आयोजना गरेको एनसेल मेला २०७४ मा पोख्रेली तथा विदेशी दर्शकहरुले भरपुर मनोरञ्जन लिएका छन् । कम्पनीले आफ्ना ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरुसँग थप न...
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान नदिँदा चिनियाँ लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा लाथी थर्मल प्लान्ट राख्नु पर्ने भएको छ । नवलपरासीको बर्दघाटबाट सिमेन्ट ...
काबेली नबन्दा उद्यमी मारमा, ५७ मेगावाट विद्युत् खेर जाने
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान नदिँदा विद्युत् उत्पादनको तयारीमा रहेका तीनवटा आयोजना समस्यामा पर्ने भएका छन् । कूल ५७ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजना आगा...
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले एकैसाथ दुईओटा अवार्ड पाउन सफल भएको छ । बैंकले यही पुस ३ गते सोमवार World HRD Congress, Employer Branding Institute and Stars of the industry Group द्वारा काठमा...
एन आई सी एशिया बैंकको नयाँ शाखा बाजुराको मार्तडीमा
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो अर्काे शाखा बाजुराको मार्तडीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अति दुर्गम तथा ग्रामिण भेगमा समेत आफ्नो सेवा बिस्तार गर्ने उदेश्य अनुसार यस बैंक र यु. के. एड को लगानीमा सञ्...
फेरि राज्यकोषबाट आसेपासेलाई ८ करोड बाँड्ने तयारी
काठमाडौं ५ पुस । सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै बेला शे...
एनआईसी एशिया बैंकलाई डिबेन्चर २०८१-८२ निष्काशन गर्न स्वीकृति
मङ्लबार, पुस ४, २०७४
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ‘एनआईसी एशियाडिबेन्चर २०८१/८२’ निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रू. १ हजार अंकित दरका ३० लाख कित्ताले हुन आउने रू. ३ अर्बबराबरको ‘एनआईसी ए...
संसद पुनर्संरचना गर्न अर्थले दिएन रकम, किन ?
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले सरकारसँग तीन ...
काठमाडौं । बैंकिङ पहुँचलाई ग्रामिण स्तर सम्म पुर्याउने उद्देश्यले जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले चार स्थानमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ । सर्लाहीको हरिवन,रौतहटको चन्द्रपुर, नुवाकोटको बट्टार र तनहुँको दमौली...
सबै नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिने
काठमाडौं २७ मंसिर । सरकारले मुलुकभरका सबै नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत मुलुकभरका दुई सय ९३ नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कर ...
काठमाडौं । एनसेलले नेपालमै पहिलो पटक अनलाइन रिचार्ज सेवा सुरु गरेको छ । यो सेवा अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले भिसा, मास्टरकार्ड र युनियन पेको आफ्नो डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी जहाँ सुकै र जहाँ भएपनि...
आजदेखि प्लेनको भाडा बढ्यो(दररेटसहित)
वायु सेवा सन्चालक संघले आन्तरिक हवाई उडानको भाडा बढाएको छ ।हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि भएसँगै संघले यही मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी आन्तरिक हवाई उडानका भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल आयल निगमले हवाई इ...